७ माघ २०७५ सोमबार/ ०४:२८
सशस्त्र प्रहरीको यो काण्डपछि पूर्वका खसीबोका बिक्री शून्य
काठमाडौं, २८ मंसिर । सिकेन्दर साह हजुरबुबाको पालादेखि सिरहाको लहानमा बस्दै आएका सामान्य किसान हुन । उनले विगत दश बर्षदेखि पूर्वका विभिन्न ठाउँमा बोकापाठी ब्यापार गर्दै आएका थिए । तर, गत सोमबार दशबर्षदेखि कमाएको रुपैया बराबर ठगिए, त्यही पनि राज्यलाई सुरक्षा दिने निकाय सशस्त्र प्रहरीबाट ।
साहले सोमबार पूर्वी–उत्तर मोरङको मधुमल्ला बजारबाट ५० वटा बोकापाठी खरिद गरे । विक्रीकालागि सोही दिन साँझ दुई वटा गाडीमा सप्तरी÷सिरहा तर्फ लैजादै गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल, सुनसरी भण्टाबारीस्थित चेक पोस्टले समात्यो । पहिलो लटमा पठाएको १९ वटा बोकापाठी भएको गाडीमा चेक नै भएन । ५० मध्ये दुई वटा पठाउँनुपूर्व नै विक्री भएकोले बाँकी २९ वटा बोकापाठी सशस्त्र प्रहरीले पक्राउँगरी भोलीपल्ट विक्री गरेको आरोप साहले लगाउँदै आएका छन् ।
साहले खरिद गर्दा तिरेको नौ सय रुपैया र बोकापाठी निकासी कर बापत ५ हजार कर मधुमल्लामा तिरेको वील देखाउँदै भन्छन् ‘५० वटा विक्री गर्दा त्यै ४, ५ हजार फाईदा हुन्थ्यो । तर, दुई लाख दश हजार बराबरको खरिद मूल्य बराबरको बोकापाठी समातेर अरुलाई सशस्त्र प्रहरीले बेचिदियो ।’ दश बर्ष व्यापार गर्दा पनि आफुलाई दुई लाख फाईदा नभएको उनी सुनाउँछन् । पूर्वको मधुमल्ला, धरान, लेटाङ लगायत पश्चिमको निजगड, हेटौडाबाट समेत बोखापाठी खरिदगरी सिरहा, सप्तरीमा ल्याएर विक्री गर्दै आएको उनी बताउँछन् । बोका र पाठी प्रायः मञ्दिरमा बली दिनेहरुलाई मात्रै विक्री गर्दै आएको उनले बताए । यसरी गरिखानै नसक्नेगरी अत्याचार गरेपछि कसरी बाच्न सकिन्छ ? पक्राउपछि आफ्नो बोकापाठी माग्दा सशस्त्र प्रहरीले उल्टै धम्की दिदै उनले भने, ‘यहाँ हिजो पनि दुई जना मान्छे मर्यो, चुपचाप गईहाल ।’ त्यसपछि म त्यहाँबाट हिडे ।
दुई दिनपछि उनको त्यो बोकापाठी भन्सारले आधा मूल्यमा लिलामी गरिदिएको उनले सुने । स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीले सेटिङ मिलाएर स्थानिय खसीबोका व्यापारीलाई आधा मूल्यमा लिलामी गरिदिए । उनको २९ वटा बोकापाठीको मूल्य दुई लाख १० हजार साउँमात्रै परेको थियो । तर, लिलामीमा त्यसको आधाँ, अर्थात एक लाख ४ हजारमै (हेर, विक्री गरेको लिलामी कागज) विक्री गरेको उनी बताउँछन् । यस घट्नाबारे प्रदेश १ का कृषि सचिव लगायतका समेत खवर पुगीसक्यो । तर, केही पनि न्याय पाएका छैनन् ।
यस घट्नाबारे भण्टाबारीका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारी आफुलाई थाहा नभएको बताउँछन् । झारो टार्ने तरिकाले उत्तर दिदै भन्छन्, ‘खै, मलाई त थाहैँ छैन् । बुझुनुपर्छ ।’ त्यस्तै जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल ४ नं. गण, ईनरुवाका सहईन्चार्ज डिएसपी किरण बस्नेतका अनुसार घट्नाबारे केही सुनेको थिए । तर, त्यो बोकापाठी भन्सारलाई बुझाईदिएको हुनपर्छ । भन्सार कार्यालय भन्टाबारी सुनसरीले भने प्रहरीबाट आएको कारण लिलामीमा बिक्रि भईसकेको विल नै बुझाई सकेको छ ।
यो घट्नाले पूर्वमा खसीबोका व्यापार सून्य
साहमाथि परेको यो घट्नाको प्रत्यक्ष असर पूर्वका बजारमा व्यापाक रुपमा परेको धरान कृषि बजारका बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिए । प्रत्यक बिहीबार लाग्दै आएको धरान कृषि बजारमा यस घट्नाले गर्दा व्यापार ९० प्रतिशत घटेको छ । यस्तै घट्नामा पर्नुभन्दा केही समय हेर्ने भनेर खरिदकर्ताले किन्ने चासै नदिएको उनी बताउँछन् । अन्य दिन एक हजार वटासम्म खरिदविक्री हुन्थ्यो भने अहिले दुई तीन सय पनि विक्री नभएको भट्टराई बताउँछन् ।